आइपीएलः पन्जाबमा ४ खेलाडी परिर्वतन, मौका को–कोले पाए? - Everest Dainik - News from Nepal
आइपीएलः पन्जाबमा ४ खेलाडी परिर्वतन, मौका को–कोले पाए?
काठमाडौं, चैत १३ । इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपीएल) अन्तर्गत कोलकाता नाइट राइडर्सस विरुद्धको खेलमा किंग्स इलाभेन पन्जाबले टस जितेर बलिङ रोजेको छ ।
कोलकातासँगको खेलमा पन्जाबले ४ खेलाडी परिर्वतन गरेको छ । उसले साम करन, मुजीउर रहमान, अंकित राजपूत र निकोलस पुरनलाई आराम दिएको छ । उनीहरुको ठाउँमा पन्जाबले डेबिड मिलर, बरुण चक्रवर्ती, हारडुस विलजोएन र एंड्रयू टाईलाई मौका दिएको छ । यता कोलकाताले भने अघिल्लो खेलका सबैलाई आज स्थान दिएको छ ।
याे पनि पढ्नुस आईपीएल क्रिकेटमा चेन्नईको लगातार दोस्रो जित
याे पनि पढ्नुस आइपीएलः सन्दीपको टीमलाई लगातार तीन सफलता